Visual Approach na VMC amin'ny fiaramanidina, inona izany? | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | fiaramanidina, Flights
Angamba efa naheno ny teny hoe "fomba fijery maso" na "VMC" ianao ary tsy mahalala hoe inona marina izany na angamba fantatrao bebe kokoa na latsaka izay mety ho izy nefa tsy mazava tsara aminao. Izany no antony androany, te-hiresaka aminao momba izany aho satria raha olona mandeha amin'ny fiaramanidina mahazatra ianao dia toa ny fampahalalana tena mahaliana.
Na dia ambonin'izany rehetra izany dia fampahalalana raha olona maniry hianatra pilotra ianao mankafy ny fampahalalana avy ao anatiny momba ny tena toetran'ny Visual Weather Conditions.
1 Inona no atao hoe fomba fijery hita maso na VMC / CMV?
2 Ka maninona no visual?
3 Tena toe-javatra virtoaly
4 Tohizo ny fanakaikezana toy ny mahazatra
5 Fomba fiasa sy alàlana amin'ny maso
6 Fifamoivoizana amin'ny rivotra
Inona no atao hoe fomba fijery hita maso na VMC / CMV?
Ny fomba fijery hita maso dia fomba fanao amin'ny fahendren'ny mpanamory. Midika izany fa ny mpanamory fiaramanidina dia handray ny làlana fohy indrindra sy mety indrindra mankany amin'ilay lalana. Avela ny fomba fijery hita maso (angatahana amin'ny ATC ny fangatahana) izay misy fifandraisana an-tsary amin'ny seranam-piaramanidina fitadiavana.
Ny fomba fijery hita maso dia midika etsy andaniny fa manidina tsy misy fitetezana na fanampiana fanampiana ianao, fa ny mpanamory dia tsy maintsy / tsy maintsy manamboatra ny fitetezana ho fomba mahazatra. Amin'ity fomba ity ihany no ahafahanao manana sidina azo antoka ary mankafy fiadanan-tsaina ao ambadiky ny kodiaran'ny fiaramanidina.
Ka maninona no visual?
Ny fomba fijery hita maso dia afaka mamonjy fotoana sy vola (mety hitsin-dàlana ianao raha ampitahaina amin'ny fomba efa navoaka).
Ny fomba fiasa hita maso dia ahafahan'ny ekipa manapa-kevitra sy manidina amin'ny fomba azo ampiharina kokoa.
Ny zava-dehibe dia ny mifehy ny famerana farany ho an'ny fomba fijery hita maso. Ity fampahalalana ity dia hita amin'ny sarintany / tabilao STAR isaky ny toerana alehanao. Raha ny ESSA STAR ho an'ny runway 26 dia misy fameperana ny hidina ambanin'ny 2500 metatra ivelan'ny sehatry ny radial ARL 045-110. Eo anelanelan'ny 21.00 - 06.00 (ora eo an-toerana fa tsy UTC). Efa zatra mandeha ambanin'ny 2500 metatra ianao mandra-piorenanao amin'ny farany. Ireo fameperana ireo dia hisy fiatraikany amin'ny drafitra fanaovan-tsika maso. (Ny seranam-piaramanidina sasany dia namoaka fombafomba fanatonana toa ny ENBR, Bergen)
Tena toe-javatra virtoaly
Andao lazaina fa manidina ny tongotra tongotra TEB amin'ny 0º ianao ary hahafantatra ny fanamboarana ARL. Alohan'ny hanombohana ny fomba fiasa hita maso ATC:
Pilot: Stockholm Control, Scandinavian 081 dia manana lalan-kely mihazakazaka.
ATC: Scandinavian 081, nahazo alalana hanatona ny lalan'ny làlambe faha-26, tatitra amin'ny farany.
Rehefa nahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny ATC ianao, fotoana tokony handaminana ny fomba fiasao. Miankina amin'ny habetsaky ny fotoana ilainao amin'ny fomba farany, azonao atao ny mijery ny tabilao IAL indray hahitanao ny haavony. Te-hisambotra ny Glide Slope ianao.
Andao holazaina fa eo amin'ny 6 Nm eo amin'ny tsipika fahatongavana isika, noho izany ny fidirana eo amin'ny Glideslope dia miresaka momba ny haavon'ny 1750 metatra (jereo ny tsanganana ankavia D7 ARL, ny ARL VOR dia misy 1 Nm ao ambadiky ny làlambe 26. hita etsy ambany:
Miala amin'ny TEB amin'ny 350 radial isika, amin'ny hafainganam-pandeha 210 kts (raha tsy manana famerana avy amin'ny ATC) flaps amin'ny 5 isika.
Ny hafainganam-pandeha mihazakazaka dia tokony ho ilay hidirantsika amin'ny fihodinana havia farany 160 - 180 kts ary flap ao anaty 15 miaraka amin'ny fitaovana fiambenana ambany. Rehefa any amin'ny farany ianao dia mifandraisa ATC:
Pilot: Scandinavian 081, nilamina tamin'ny famaranana tamin'ny 26
ATC: Skandinavianina 081, rivotra avy 250º tamin'ny fatotra 10, lalan'ny làlambe 26 no nadiva hidina.
Pilot: niondrana an-tanety ny Skandinavianina 081.
Tohizo ny fanakaikezana toy ny mahazatra
Ny fomba hafa amin'ny fomba fiasa hita maso dia ny fanatrehanao ny làlambe avy any amin'ny lalana mifanohitra mankany aminy. Misy fandidiana manokana natokana ho an'ity karazana fomba fanao antsoina hoe "Standard Visual Weather Approach pattern" ity ary toa ny sary etsy ambany:
Ny fametrahana flap samihafa dia tokony hanondro ny hafainganana hajaina amin'ny alàlan'ity fomba ity.. Manoro hevitra anao ny hisintona ireo boky hafainganam-pandeha sy hanavao ireo tabilao avy amin'ny pejy fiaramanidina SVA.
Araka ny efa hitanao nandritra ilay lahatsoratra, ny Toetran'ny toetr'andro momba ny toetr'andro dia misy ifandraisany amin'ny fiarovana ny sidina. Ny manidina dia tsy hoe hisambotra fiaramanidina fotsiny ary hanomboka ny sidina, misy ora maro amin'ny asa sy fandalinana ao ambadik'izany ary koa, ilaina ny fanohanana ara-teknika amin'ny tany hahatratrarana sidina azo antoka. Amin'io lafiny io dia ilaina ny fahalalana ny angona teknika hahafahana manidina soa aman-tsara ary tsy mampidi-doza ny hafa.
Fomba fiasa sy alàlana amin'ny maso
Rehefa miresaka momba ny fomba fijery hita maso sy ny fomba fifandraisana isika, dia misy ifandraisany amin'ny fahatongavan'ireo sidina isan-karazany izany. Tsy fomba fanao instrumental fotsiny io fa mila manao ny fomba fiasa amin'ny aerodrome koa izy ireo ka mandray ny références visual mba hahafahana miandry ny fiarovana. SAINGY ny fikafika fanehoan-kevitra dia tsy tokony hafangaro amin'ny fomba fijery hita maso miaraka amin'ny fitsipiky ny sidina.
Amin'ny fomba fijery hita maso, ny fiaramanidina na ny fiaramanidina dia tsy maintsy manao ny fomba mankany amin'ny aerodrome mifototra amin'ny referansa maso, fa tsy hitsahatra mihitsy ny ho sidina fitaovana ary tsy maintsy karakaraina toy izany. Saingy alohan'ny hanovana ny fitsipiky ny sidina dia mila mampandre ny mpanara-maso ny tanjony ny mpanamory mba hanamafisana fa nofoanany ny sidina fitaovana hivoahany amin'ny fomba fijery hita maso.
Na izany na tsy izany, raha te-hanao tetika na hanova ny toetran'ny sidina ny mpanamory dia tsy maintsy mangataka alalana amin'ny mpanara-maso foana izy hanome alalana azy.
Fifamoivoizana amin'ny rivotra
Amin'izao fotoana izao ny fifamoivoizana an-habakabaka dia manana hetsika tena voafehy noho ny lalàna momba ny sidina hita maso sy ny fitsipiky ny sidina fitaovana. Toy izany koa, ny toetr'andro momba ny toetr'andro dia ilaina ihany koa amin'ny fiheverana azy ireo. Rehefa tsy afaka manidina ara-dalàna ny fiaramanidina iray dia tsy maintsy atao izany ao an-tsaina ny toetran'ny toetrandro sidina fahitana.
Ny aerodrome tsirairay dia tsy maintsy mamaritra sy manao tatitra momba ny toe-javatra iasany mba hananana fanaraha-maso sy fiarovana tsara amin'ny sidina. Ny fifamoivoizana amin'ny rivotra dia tsy misy ifandraisany amin'ny fifamoivoizana an-tanety ary mila fanaraha-maso henjana kokoa mba hilamina ny zava-drehetra. Ireo mpiasa voaofana sy matihanina irery ihany no afaka mitarika amin'ny fanapahana ny fomba fiasan'ny fiaramanidina. Ankoatr'izay, ny mpanamory fiaramanidina dia tsy maintsy manam-pahaizana voaofana mba hahatratrarana sidina azo antoka.
Ahoana ny hevitrao momba an'io fampahalalana rehetra io? Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fanidinana na te hahalala bebe kokoa momba ny lohahevitry ny fiaramanidina ianao dia manoro hevitra anao aho mba hisoratra anarana amin'ny làlana manokana mifandraika amin'ireo lohahevitra ireo na hanombohana fampianarana izay misy ifandraisany amin'ny fiaramanidina. Ny manidina dia mety ho traikefa nahafinaritra, fa raha te hahomby, mila manana fampahalalana tsara momba izany ianao. Ary raha te hilaza aminay ny zavatra niainanao tamin'ny naha mpanamory fiaramanidina anao ianao dia asaina hanao izany! Tianay ny mandre ny momba anao eo amin'ny rahon'ny planetantsika ary inona no heverinao fa manan-danja indrindra amin'ny fananana sidina azo antoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Visual Approach na VMC (Toetran'ny toetr'andro Visual Meteorological)